What they don't tell you about elections by Maha Balakrishnan
Classic Joke: The Biology Exam
Anything But UMNO (ABU) - The ABU message by Haris Ibrahim
New Mandore on the block, an alliance of MIC, Hindraf and HRP rooting for UMNO
As long as UMNO rules there will not be justice for Teoh Beng Hock, Ahmad Sarbaini, Aminurasyid, V.Kugan and others,avote for MCA, MIC or Gerakan isavote for UMNO
Werewolf Wira Thu spitting sh**s from his mouth
“A Burmese Buddhist extremist monk” (with English Subtitle)
သမိုင်းတကွေ့ ပြန်လည်နေပြီ သတိထားကြ (မိုးသီးဇွန်)
Radio Australia: GE13 Going To Be The Mother Of All Elections
Myanmar IDIOTS U Thein Sein, Aye Mg and Wira Thu used to give self incriminating interviews
တရားခံ ဘယ်သူလဲ? (မေးရတာများ မရှိတာလဲများ ပြဿနာလဲ များလါပြီ)
Posted: 04 Apr 2013 09:17 AM PDT
Violent anti-Muslim riots in Myanmar prove that "militant Buddhist" isn't an oxymoron
"People are violent; it just so happens that some of those people are Buddhists," said Michael Jerryson,aprofessor of religious studies at Florida's Eckerd College and co-editor of the book Buddhist Warfare. "Particularly in the West, Buddhists are usually seen as peaceful, and they're romanticized and idealized that way. But violence is found in all religious traditions, and Buddhism is no exception."
The violence in Myanmar, which resulted in charred bodies and mosques in the streets of Meikhtila on March 20, has been fanned byagroup of militant extremist monks known as the 969 group—the name isanumerological reference to the Buddha, his teachings, and monks. The group's leader, U Wirathu, was sentenced to 25 years in prison in 2003 but was released last year by presidential pardon. He is now calling foraboycott of Muslim-owned businesses, with Buddhist-owned stores strongly encouraged to feature stickers with the group's logo.
"When the profit goes to the enemy's hand, our nationality, language and religion are all harmed," Wirathu said inaspeech posted online. "They will take girls with this money. They will force them to convert religion. All children born to them will beadanger to the country. They will destroy the language as well as the religion."
Joshua Kurlantzick of the Council on Foreign Relations wrote that 969 has been "giving anti-Muslim speeches, holding anti-Muslim rallies, and distributing DVDs full of vitriol for at leastayear." Another monk leadingaprotest last week, interviewed by Reuters, "said he wanted revenge against Muslims for the destruction by the Taliban of Buddhist statues in Bamiyan province in Afghanistan in 2001."
Echoes of the country's situation can be found in Sri Lanka, where similar Buddhist-on-Muslim violence is occurring in the wake of the Sinhalese majority's victory in the country's brutal civil war. And observers have drawn another parallel that is even more troubling, labeling 969aneo-Nazi group that is trying to make Myanmar ethnically and religiously pure.
"The Nazis engaged in various methods of dehumanizing the Jews in order for violence to take place. In many ways the 969 movement … the way they're racializing the Muslims, creatingadehumanization of them, is similar," Jerryson said. "People who commit violence like this don't see themselves as the aggressors. They see themselves as defenders from the encroachment of Islam."
Posted: 04 Apr 2013 06:40 AM PDT
What are you voting for in the coming general election? When you mark your ballot paper, are you voting for who you want as prime minister of Malaysia? Parliament has just been dissolved, but for months now, we have been inundated with billboards, television advertisements and snail-mail flyers of prime minister Najib Razak, touting his achievements over the last four years, his proposed policies for the future and why it is important to keep him on as prime minister to realise the dream ofaunited, prosperous 1Malaysia.
Sometimes, other faces may appear on these promotional materials next to him - usually, the BN candidate likely to be fielded in the 13th general elections in that particular constituency. But it is Najib's face, endorsement or words that are prominent. What do these promotional materials say to you? Do they say, "Vote for BN if you want Najib as your prime minister"? Do they say to you, "If you want our product - Najib and his 1Malaysia - then the price is your vote for BN"?
The promotional campaign that BN has been running these last few months tries to focus the eye of the electorate on who it is they wish to see as prime minister of Malaysia. The campaign tries to enforceasimple yet dominant connection in your mind: Najib = BN. So vote for the BN candidate running in your constituency if you want to keep Najib as prime minister. But this simple message is grossly misleading. It givesafalse impression about what it is we actually vote for when we step into the polling booth. When your hand is poised to mark an 'X' on the ballot paper on polling day, you will not be voting for who will become prime minister.
You will be voting for who you want as your representative in the Dewan Rakyat (your 'MP'), and some of you will also be voting foralawmaker to sit in your state assembly. It is our MPs, once elected, who get to decide who is to be prime minister. Under our federal constitution, the king appoints the prime minister, but the appointee must command the confidence of the majority of the MPs of the Dewan Rakyat. So, making sure that the majority of the MPs come from one particular political coalition only ensures that the prime minister will be from that coalition. It does not ensure who among the MPs of that coalition will be prime minister. That depends on who it is the majority of the MPs wishes to be prime minister.
And during their elected term, these MPs can change their minds and place their confidence in someone else to be prime minister. Is itacertainty that if BN winsamajority of parliamentary seats in the 13th general election, its MPs will keep Najib as prime minister? No, it is not. The ruling party's words and actions tell us that there is no guarantee that Najib will continue to be prime minister if BN wins the next general elections.
Their words and actions suggest that Najib can only be guaranteed the "confidence" of the ruling party if he winsastronger parliamentary majority and regains its lost two-thirds majority. Former premier Dr Mahathir Mohamad himself has reportedly told AFP that Najib could facearuling-party leadership putsch if he doesn't improve on BN's results in the 2008 general elections and that if Najib did not perform, there will be "some necessity to switch horses". Mahathir tempered his wordsafew days later by stating that what he had said was "only theoretical".
Yet Mahathir's 'theory' was not met withacollective public rejection by Najib's colleagues in BN orapublic pledge of allegiance to him whatever the margin of his victory at the polls. Tied to this, the ominous lesson from our recent history, involving Najib's predecessor, no less. In the 2008 general elections, Abdullah Ahmad Badawi was the incumbent prime minister, and plugged by BN to continue as prime minister if it won. But BN lost its two-thirds parliamentary majority and subsequently, the country lost Abdullah Ahmad Badawi as prime minister.
No doubt, those who voted for the BN candidates in those elections did so anticipating and perhaps seeking Abdullah Ahmad Badawi's continuation as prime minister for another term. What they got instead aboutayear later was someone else as prime minister, someone who did not getamandate at the polls. Ask yourselves, what are the chances that BN will getatwo-thirds parliamentary majority in the 13th general elections? Are significantly more voters likely to vote for BN candidates in the coming elections than in the last one?
Look to the independent voter surveys and election analyses - do any of them point toahigh degree of certainty that BN will captureatwo-thirds majority? Because that is what needs to happen for Najib to be guaranteed his position. Where does that leave you? You may be one of the many Malaysians with deep misgivings over BN or its component parties, their policies or the direction they have taken the country in the last 55 years. But at the same time, you may feel that the country is on the right track under Najib's stewardship and you may be willing to give him five more years at the helm, so long as he leads and controls the policies of the party in power.
On the strength of this, you may be ready to cast your vote in favour of whichever BN MP is running in your constituency, in the belief thatavote for that BN MP isavote to keep Najib as prime minister. But your vote may not buy you what you seek. Between your vote and what you seek are 13.1 million registered voters and the internal power play ofapolitical coalition whose policies and conduct you do not agree with. So when deciding who to vote, look to the party not its titular leader, because the party can change its leadership without checking with you first.
Vote based on the party's policies, track record and conduct, not only on those of its current leader. Before using the currency of your vote, weigh the costs and risks of what it is you are purchasing. Ask yourself if you could live with the next level of leadership of the political party leading your country if your favoured candidate gets the boot. Ask yourself if you are willing to take the risk that the policies of the leader that you favour may expire along with his position inafew months' time. Don't allow the gloss and spin of the election campaign to be the basis of your vote.
As with the purchase of any advertised product, before casting your vote, find the fine print, conduct your own research and be certain of what it is you are buying. With the current BN campaign, you are not seeing the fine print. Not your fault; the fine print is invisible.
But let me summarise what it says:
Seller does not warrant that final product will be as advertised.
Seller reserves the right to replace product withacompletely different or inferior product.
The final product provided is non-refundable and non-exchangeable.
And remember: if you are unhappy with the uncertainty of what is on offer, you are free to see what other products are on the market. Or, choose not to buy this time around. The decision is yours. But since your fate is tied to mine, I hope the decision is an informed and well thought out one. Malaysiakini
Posted: 04 Apr 2013 06:36 AM PDT
SPRM juga tidak layak mendapat kerjasama darinya kerana kerana suruhanjaya itu didakwa bertindak "nakal" dan "tidak jujur", kata Abdul Taib ketika ditemui pemberita selepas mesyuarat dewan tertinggi BN di Kuala Lumpur hari ini.
Subject: Biology Exam
The last question was: Name seven advantages of Mother's Milk?
The question was worth 20 points. One student, in particular, was hard put to think of seven advantages.
Posted: 04 Apr 2013 03:53 AM PDT
Posted: 04 Apr 2013 03:52 AM PDT
lie detector : So the real Uthaya has emerged targetting PR seats and the blueprint issue was just sandiwara. The moment Waytha got back his passport, passed through immigration unhindered and long time Hindraf leader Jayanthas quit to join PKR, I could smell something fishy. Hindraf has trampled underfoot the blood of all those who died in custody. Shame! Shame! Shame!
Uthaya forces three-way fights in Pakatan seats By Ahmad Fadli KC The Human Rights Party will force three-cornered fights in eight Pakatan Selangor seats that are largely strongholds of Pakatan senior leaders. The Hindraf offshoot today announced their intention to contest in three parliamentary seats (Kota Raja, Kelana Jaya, Kuala Selangor), five state seats (Seri Andalas, Seri Muda, Ijok, Bukit Melawati, Seri Setia).
The Hindraf offshoot today announced their intention to contest in three parliamentary seats (Kota Raja, Kelana Jaya, Kuala Selangor), five state seats (Seri Andalas, Seri Muda, Ijok, Bukit Melawati, Seri Setia). Their leader P Uthayakumar will be vying for bothastate and parliamentary seat. "Our candidate for P111 Kota Raja and N49 Seri Andalas will be P Uthayakumar," said HRP's protem national treasurer A Sugumaran atapress conference today. HRP is one of the factions that resulted fromamultiple split in the Hindu rights movement Hindraf after its milestone street protest in 2007.
Uthayakumar's brother Waythamoorthy heads another offshoot that has been attempting to court both Pakatan Rakyat and BN with its blueprint to solve the problems of the Indian community. Uthayakumar said he has chosen to run in Kota Raja because the constituency has roughly 29 percent Indian voters, whom he expects to support his movement. azlanHe expects the 44 percent Malay voters to be split between BN and Pakatan. He is counting on getting the full Indian vote andapart of the Chinese vote to secure himasafe win.
He added that BN is unlikely to haveastrong presence due to the absence of Felda voters, Orang Asli and army postal voters that are the ruling party's "fixed deposit". Uthayakumar said their theme for the election will be 'Send the first Hindraf MP to Parliament'. He said havingaHindraf rep in the house will be able to solve the problems of poverty and statelessness afflicting the Indian community. "If I have power, I can doalot more, but up to now all I can do is to highlight the issues," he said. HRP, an attempt to turn the Hindraf movement intoapolitical force, has however been frustrated by the Registrar of Societies' rejection of their application.Malaysiakini
They have been bought over, one guy wants to fix the problems and poverty of Indians, if that ain'tajoke, that is why Samy Vellu says he isawinnable candidate. Hindu Rights Action Force (Hindraf) has now challenged DAP parliamentary leader Lim Kit Siang, toadebate, provoked by what it alleges as the party's plagiarism of the movement's five-year blueprint document. Its national adviser, N Ganesan (right) said after studying the contents of the DAP Gelang Patah Declaration for the Indian community, it was obvious the plan was plagiarised from their blueprint.
"After having been through the effort to draw up the blueprint ourselves, we cannot understand howaserious document in this category can be developed otherwise within 24 hours.
" Since,alarge part of the Gelang Patah document really comes from the Hindraf blueprint, we cannot understand why in the first place DAP does not want to endorse our blueprint itself or negotiate on it," he said
Ganesan added that this questions the DAP's sincerity in coming out with the document. "In our opinion all of this reeks of political opportunism and another impending grand deception for the Indian poor. Malaysiakini
We are here to remember Teoh Beng Hock, cruel victim of injustice and misgovernance, and to reaffirm our commitment to continue to do all we can to ensure that we will not cease until justice is done to Beng Hock and his family. The death of Teoh Beng Hock at the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) headquarters at Shah Alam on July 16, 2009, together with cases of Ahmad Sarbaini, Aminurasyid and V. Kugan will be among the priority cases of "transitional justice" inanew Pakatan Rakyat government in Putrajaya after the 13th General Election to address human rights violations and rebuild social trust inademocratic system of governance.
What is "transitional justice"?
Let me quote from the International Center for Transitional Justice (ICTJ): Transitional justice refers to the set of judicial and non-judicial measures that have been implemented by different countries in order to redress the legacies of massive human rights abuses. These measures include criminal prosecutions, truth commissions, reparations programs and various kinds of institutional reforms. Transitional justice is nota'special' kind of justice, but an approach to achieving justice in times of transition from conflict and/or state repression. By trying to achieve accountability and redressing victims, transitional justice provides recognition of the rights of victims, promotes civic trust and strengthens the democratic rule of law.
In the aftermath of massive human rights abuses, victims have well established rights to see the perpetrators punished, to know the truth, and to receive reparations. Because systemic human rights violations affect not just the direct victims, but society asawhole, in addition to satisfying these obligations, states have duties to guarantee that the violations will not recur, and therefore,aspecial duty to reform institutions that were either involved in or incapable of preventing the abuses.
A history of unaddressed massive abuses is likely to be socially divisive, to generate mistrust between groups and in the institutions of the State, and to hamper or slow down the achievement of security and development goals. It raises questions about the commitment to the rule of law and, ultimately, can lead to cyclical recurrence of violence in various forms. As it is seen in most countries where massive human rights violations take place, the claims of justice refuse to 'go away.' In recent decades, transitional justice has gained an important foundation in international law and increasingly, all states are expected to enshrine and uphold four fundamental obligations of vital importance in the area of human rights in the fight against impunity and respect for victims' rights. These are:
In the tragic case of Teoh Beng Hock, the Malaysian government has failed to live up to all these four fundamental obligations – powerful reasons why transitional justice has to be invoked when there isachange of government in Putrajaya in the 13GE. The Prime Minister Datuk Seri Najib Razak broke his solemn undertaking to Teoh Beng Hock's family on July 28, 2009 that "no stone would be left unturned" to find the causes and circumstances of TBH's death. It is clear that the Najib administration is not serious in wanting to bring Teoh's killers to justice.
Two weeks ago, MACC Chief Commissioner Datuk Seri Abu Kassim Mohamad said the MACC would decide on the form of disciplinary action against three MACC officers named by the TBH Royal Commission of Inquiry of having "driven…Teoh…to commit suicide…by their aggressive, relentless, oppressive and unscrupulous interrogation" – when the three should be charged in court foravariety of criminal offences including perjury at the RCI and the TBH inquest as well as the re-opening of high-powered investigation into Teoh's killers as the RCI has found that the initial police investigations had been undermined by the conspiracy of "blue wall of silence" of MACC officers to thwart police investigations from establishing the truth and to pervert the course of justice.
(Speech at the forum by Lim Kit Siang "Justice inaPeriod of Change" as part of the Teoh Beng Hock third death anniversary programme held at KL/Selangor Chinese Assembly Hall on Tuesday, 10th July 2012 at 8 pm)
Malaysian superior and mighty security forces has flushed out the Sulu Sultanate armed invaders – BRAVO to our brave and courageous boys. It was reported 52 of the intruders, together with their general were killed. Although there're still leftover from the 100 – 500 who came and try to invade Sabah, Malaysian military should have sufficient firepower to neutralize them, once and for all. The best news – none of our security forces personnel was injured since the "Operation Daulat" started with an airstrike by jet fighters of the Royal Malaysian Air Forces. For once, it gets you thinking – what were these intruders thinking – that they could defeat 100,000 Malaysian military forces with their 100 – 500 Rambos?
However, there were confusions and doubts as to the effectiveness of the airstrike as the "mopping up" operations couldn't find any bodies, according to Agence France Presse. On the other hand, spokesman for sultan Jamalul Kiram III claimed the bomb exploded as far as 1 km away from his men's location. It would beamagnificent scenario, with intruders watching the fireworks while devouring their barbeque chicken wing 1km away. They even claimed that the airstrike had actually hit Malaysian own soldiers who moved in to the camp left by the intruders.
The most sparkling question - can the 8 fallen heroes be avoided, or at least minimized? Based on the ultimate airstrike and ground attack decision which saw no casualties from Malaysian securities forces so far, the answer is obvious. The 8 families could still enjoy their father and husband's loves, ifaclear chain of command andacompetent leader was in order in the first place. You do not negotiate with terrorists, let alone sending KFC and Tropicana orange juices to them (*grin*), to the tune of2weeks before recognize they're dangerous. If Cuba were to do the same to Florida, US military would have finished them within hours, the most – mission accomplished.
If there's one thing that PM Najib should do after this crisis, it is to transfer Home Minister Hishammuddin Hussein, his cousin, to probably Ministry of Youth and Sports. This man's incompetence is beyond anyone's imaginations. In fact, there's no difference if you put Hishammuddin or Ng Yen Yen in charge of the Sabah invasion crisis management. Both would screw up big time since they tend to use their mouth instead of brains to do the thinking. Regardless of their religion,aterrorist is stillaterrorist and you do not negotiate when your sovereignty has been breached. You do not call foratime-out to negotiate for 2-weeks when you're being raped, do you (*tongue-in-cheek*)?
To make things worse, the chain of command was not visible at all. People do not know if the Home Minister or the IGP (Inspector General of Police) Ismail Omar was in charge initially. Their statements contradicted each other so much so the terrorists were having lots of fun and time exploring their newly invaded land as if they were tourists. Thereafter you've Defence Minister Zahid Hamidi and Armed Forces chief Gen Zulkifeli joining the party, and yet there was no clear sign of who was actually in charge of the operation. Once, IGP claimed the airstrike killed 12 Filipino gunmen but later the Armed Forces chief clarified that the9bodies of Sulu militants discovered were of those killed in last Friday's shootout, and not by the air strikes.
Maybe Malaysia has been enjoying too longapeaceful period that the distance instance of war was not considered into the national security SOP. A clear chain of command should be drafted (if there's none) for such crisis, and if there's already one, why wasn't it followed? If their intention was to be front-paged in newspaper as if they're war hero, politicians should be thrown out from the command centre's windows. Let the real man do the job.
The Defence Ministry got RM15.2 billion and RM13.7 billion in their 2013 and 2012 annual budget respectively. While the country hasatotal of 44 fighter aircraft ranging from Sukhoi Su-30, F/A-18 Hornet, MiG-29, Tiger and Hawk, there seems to beaserious lack of military transport aircraft. The country has 16 units of Lockheed C-130 Hercules with capacity of 92 troops each. Considering you need to transport military hardware into the warzone, there's hardly any decent transportation means to deliver soldiers to the battleline. This was the reason why the request for AirAsia Berhad's (KLSE: AIRASIA, stock-code 5099) commercial flights to transport more army into Sabah warzone.
Perhaps PM Najib failed his geography or he didn't know that Peninsula Malaysia and the East Malaysia is separated by South China Sea. If the country can affordaUS$75 million Boeing 737-700 for his VIP usage, surelyadecent number of military transport aircraft should be in the inventory to transport personnels between Peninsula Malaysia and the East Malaysia, no? As former defence minister, PM Najib should know the importance of such basic necessity. Wouldn't that be more important than2units of Scorpene submarines purchased at the cost of RM3.4 billion? Heck, the money spent on submarines alone can be used to purchase 10 units of Boeing 737-700 with lots of loose change left.
Admit it – Sabah and Sarawak are sitting ducks waiting to be invaded anytime by anyone. During the Sabah invasion crisis, up to7battalions (about 7,000 soldiers) from Peninsula Malaysia were sent to Sabah. Does that means Sabah alone cannot defend itself from 200 terrorists, since the state does not even have 7,000 soldiers, out of the country's 100,000 strong army? If Sabah has the numbers, why wasn't it used instead? Even if Sabah doesn't have 7,000 soldiers, couldn't some be sent from Sarawak instead? AirAsia operates between Sabah and Sarawak right?
While Sabah hasalong coastline to defend, you do not have to beagenius to figure out where the pirates' favourite landing points are. Unless they come in using submarine or aircraft carrier, chances are they would be using the same routes as how they migrate illegally into Sabah and subsequently given their "ICs" by former premier Mahathir. If you think the military intelligence does not have this information, then you're insulting one of the best intelligence units in the world. Furthermore, it's not as if only Malaysia has coastline on the planet.
Now that Sabah has been breached easily byamere 200 terrorists, there'saneed to restudy the existing national security scope and coverage. If the Sulu Sultanate managed to invade Sabah aboutamonth ago, chances are they would be able to do it again in the future. They must be stopped at all cost, unless you want to grant more "ICs" to them in exchange for their votes.
The allegations about Malaysia being training camps for terrorists can be googled on the internet. And it'saknown fact that Malaysia trained many of the MNLF (Moro National Liberation Front) commanders during their war against the Philippine government. Hadji Acmad Bayam, former chief propagandist of the MNLF, revealed to the Manila Bulletin that these MNLF forces may have at their disposalahuge arsenal, which they hid deep in Sabah's rugged terrain when they returned to the Philippines after their rigid training. He claimed among the firearms are Belgian-made G1 and FAL, which the late Libya leader
Colonel Gaddafi supplied through Malaysia.
As of now, it's still too early to declareacomplete victory over the crisis. The Sabah invasion has opened upanew chapter or wound that may not heal as fast as it started. The war is not over yet. But there're already 8 families who have lost their father's and husband's love forever, thanks to politicians' incompetence and arrogance. Via e-mail, author unknown.
Posted: 04 Apr 2013 05:10 AM PDT
"Slogan 1Malaysia sekadar slogan tanpa pelaksanaan jujur, BN biarkan golongan fanatik dan NGO perkauman terus-menerus membakar sentimen kaum dan agama, ini tidak sihat dan bahaya untuk kita," kata Pembantu Khas Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Gasing, Kasthuri Patto.
"Kita mahu perpaduan rakyat seluruh bangsa yang ada di Malaysia dengan perpaduan sebenarnya. Bukan perpaduan plastik. Kita mahu perpaduan yang kukuh, di mana seluruh rakyat senang dan tidak berprasangka buruk antara antara satu sama lain," katanya pada majlis makan malam, di sini, mlam tadi.
"Bila PR berjaya mentadbir Selangor, kerajaan negeri tidak menaikkan tarif air negeri ini malah membelanjakan RM650 juta setiap tahun untuk memberi air percuma kepada rakyat. Nilai rezab kerajaan negeri juga meningkat daripada RM400 juta kepada RM2.7 bilion. Ini membuktikan ketelusan dan kecekapan urus tadbir kerajaan negeri.
"Begitu juga di Pulau Pinang, kerajaan negeri mampu memberi insentif kepada rakyat. Ini semua bukan hutang, hutang negeri pula dapat dikurangkan daripada RM630 juta kepada RM30 juta. Ini juga kerana pentadbiran yang telus dan berintegriti," ujar beliau.
"Kali ini kita perlu ubah kerajaan (pusat) yang ada kepada kerajaan PR," katanya bersemangat. – Roketkini
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာတဲ့ကာလ အတွေ့အကြုံကိုပြန်ဝေငှခြင်တယ်။ မသိသေးတဲ့ ညီငယ်ညီမငယ်တွေ ဗဟုသုတရအောင်။ စစ်အုပ်စု (မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ၊ အသစ) လက်ထက် လုပ်ရပ်တွေက အ တူတူပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို မျက်စိမလည်ကြဖို့ပါ။ မျက်စိလေည်ရင်တော့ ခံရမှာပဲ။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး အမြင့်မားဆုံးကာလက ရဲစခန်းတွေ၊ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးတွေ အားလုံးကို ကျနော်တို့ သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့မသိမ်းပိုက်နိုင်တာ စစ်ဌာနချုပ်ရယ်၊ အသံလွှင့်ရုံပဲ ကျန် တော့တယ်။
ကျနော်တို့က ဒီအခြေအနေတိုင်း မျောထားရင် ခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ၁၉၃၀ ရေနံမြေသပိတ်ကြီးလို ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သပိတ်က ပြိုသွားနိုင်တာကို မြင်နေတယ်။ ဒီတော့ အစိုးရတရပ်ကိုအမြန်ဆုံးဖွဲဖို့ ကြိုးပန်ကြတယ်။
ဦးနု က စင်ပြိုင်အစိုးရ ထောင်လိုက်တယ်။ မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားတယ်။ လူတွေက မထောက်ခံခဲ့ကြဘူးလေ။ ကျနော် တို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ လူထုတွေက ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက မထောက်ခံခဲ့ကြဘူး။
မဆလ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေက အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ရဲ ၀ံ့ကြဘူး။ အစိုးရလဲ မရှိတော့ဘူး။ မဆလပါတီလဲ မရှိ တော့ဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့တို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်ဖွဲ့ မဖွဲ့နိုင်ရင် စစ်တပ်က အာဏာပြန်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတာ ကို ကလေးက အစ ခွေးက အစ သိနေကြတယ်။
အာဏာာပြန်သိမ်းဖို့ဆိုတာက အကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်းက တိုင်းရင်းသားတွေ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်တော့မှာမို့လိုဆိုပြီး အကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုနစ်မှာကြတော့ တိုင်းရင်းသား ပြသနာလို့ အကြောင်းပြလို့မရတော့ပေဘူးပေါ့။ ဒီတော့ အကြောင်းပြချက်က မင်းမဲ့စရိုက်တွေဖြစ်နေပြီ ဒါကြောင့် စစ် တပ်က အာဏာသိမ်းရတာပါလို့ အကြောင်းပြဖို့အတွက် ဖန်တီးပါတော့တယ်။
အာဏာမသိမ်းခင် ၂ ပတ်လောက်မှာ သူတို့ တန်ပြန်သပိတ်တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်ဆိုတာကို လုပ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ် နေတာကို ကျနော်တို့မသိပါဘူး။ သူတို့ထဲက ဒီမိုကရေစီအရေးကိုလိုလားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ကျနော်တို့ကို သတင်းတွေ ပို့ပါတယ်။ တန်ပြန်သပိတ်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုတာ လုပ်နေပြီလို့ သတင်းပို့ကြပါတယ်။
(သူတို့လုပ်နည်း က အခု မိတ္ထီလာမှာလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ချွတ်စွပ်တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနောက်ကွယ်မှာ တခုခုတော့ လုပ် တော့မယ်လို့ ကျနော် မှန်းဆကြည့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်)
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ခင်ညွန်နဲ့ စန္ဒာဝင်းက ဦးဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ရပ်က ဒီလိုပါ။ လမ်းဘေးမှာနေတဲ့ အိုးမဲ အိမ်မဲ့တွေ ဟိုစဉ်က ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလူတွေဟာသနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလူတွေက ကန်တော်ကြီးစောင်း၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၊ ပုဇွန်တောင်အမိုက်ပုံတွေမှာ နေကြရပါတယ်။ မိသားစုလိုက်ကိုနေကြတာ။ တောင်းရမ်းသားသောက်ရသူတွေပါ။ သူတို့ကို ထောက်လှမ်းရေးက ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆန္ဒပြ နေတဲ့သူတွေ သောက်တဲ့ရေတွေ အစာတွေထဲကို အဆိပ်တွေခတ်ခိုင်းတာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက တယောက်ကို ကျပ်ငွေ ၅ ထောင်ပေးပြီးခိုင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ရေသန့်ဘူးတွေကလဲ မရှိကြသေးပါဘူး။ ချီတက်ဆန္ဒပြသူတွေကို လူတွေက လမ်းမမှာ ရေအိုးတွေ။ ပုံးတွေချပြီး တိုက်ကြတာပါ။ ထမင်းထုတ်တွေပေးပြီး ထောက်ခံကြတာပါ။
ပထမနေ့မှာ ရေတွေထဲကို အဆိပ်ခပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ဟိုနေရာမှမူးလဲကုန်လိုက်၊ ဒီနေရာမှာမူးလဲ ကုန်လိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ တယောက်နှစ်ယောက်တုန်းက မသိသာပေမဲ့ ရာနဲ့ချီဖြစ်လာတော့ လူတွေအထိတ် တလန့်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ အဆိပ်မိတဲ့သူတွေ အစုအလိုက်အပြုံလိုက် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ဒီတော့မှ ကျနော်တို့လဲ တန်ပြန်သပိတ်တိုက်ဖျက်ရေးတော့ စနေပြီဆိုတဲ့ ရန်သူ့ခြေရာကို အနံ့ခံမိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူတွေလုပ်နေမှန်း မသိပါဘူး။ တမြို့လုံးမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ (နယ်တွေမှာ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။)
ဒုတိယနေ့မှာကြတော့ သောက်ရေပုံးတွေထဲ အဆိပ်ခတ်တဲ့သူတွေကို မိကြပါတယ်။ သင်္ကန်းကျွန်း၊ မြို့ထဲနဲ့ တောင် ဥက္ကလာတွေမှာ ဖမ်းမိပါတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာ လူတွေက ဒေါသမထိမ်းနိုင်ဘဲ ခေါင်းဖြတ်သတ်ကြပါတယ်။ တောင် ဥက္ကလာ ခေါင်းဖြတ်သတ်မှုကတော့ တနိုင်ငံလုံး တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။
လူတွေက သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာတော့ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်လာပါတယ်။ မလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရပြန်ပါတယ်။ လိုက်လံ ထိမ်းသိမ်းရပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကိုဇာဂနာနဲ့အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့နေ့မှာ ညဖက်ကြီး
ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာ လူ ၁၃ ယောက်ကို အစာထဲအဆိပ်ခပ်မှုနဲ့ လူထုကဖမ်းထားတယ်။ ခေါင်းဖြတ်ကွက်မြက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ လူတွေထောင်နဲ့ချီပြီး အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဗကသ ရဲဘော်တွေက သွားပြီးတားဆီးပေး ဖို့ခေါ်တာနဲ့ ကျနော်ကားတစီးနဲ့ ရောက်သွားပါတယ်။ အားလုံးက သရဲစီးနေသလို ဒေါသအမြက် ချောင်းချောင်းထွက် နေ ကြပါတယ်။
ကျနော်လဲ လူထုကို တရားဟောရပါတယ်။ နားချရပါတယ်။ အတော်ခက်တဲ့အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က ပရိယာယ် သုံးရပါတယ်။ ဒီလူတွေကို ကျနော်တို့ ဗကသ ကို ပေးပါ။ ကျနော်တို့ စစ်ပါရစေ။ တကယ်လို့မှန်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ ဦး ဆောင်ပြီး ခေါင်းဖြတ်ပေးပါမယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ မီးကိုရေနဲ့ ငြှိမ်းလိုက်သလိုရှဲကနဲ့ ငြိမ်သွားပါတယ်။ လူထု သိပ် ပင်ပန်းနေပါပြီး အိမ်ပြန်ပြီး နားကြပါလို့ နားချလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းက တော်တော်လေး အောင်မြင်သွားပါတယ်။
မင်္သကာလို့ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကို မြို့နယ်ကျောင်းသားတွေအကူညီနဲ့ ကျောက်တံတားရဲစခန်းထဲမှာ ချုပ်ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။
ကျောက်တံတားရဲစခန်းထဲကို ကျနော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ စခန်းမှူရဲ့စားပွဲမှာ မြို့နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုယ် စားလှယ်တွေက ထိုင်နေပါတယ်။ စခန်းမှူးနဲ့ ရဲတွေက ရဲစခန်းအ၀မှာ ခွေးခြေလေးတွေနဲ့ ပုနေကြပါတယ်။ ရဲစခန်းတခု လုံးရဲ လက်နက်တွေက ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေလက်ထဲမှာပါ။ (ခုခေတ်လူငယ်တွေအတွက်တော့ ဒါကို ထူးဆန်း နေပါလိမ့်မယ်။) ဒီကာလက ရဲစခန်းက သေနပ်တွေကို ကျနော်တို့ သိမ်းထားကြတာပါ။ ကျနော်မှာလဲ သေနတ်ပေါင်းစုံ ၁၉ လက် သိမ်းထားပါတယ်။ ကျနော့်ကားထဲမှာ သွားလေရာပါတယ်။
စခန်းမှူးနဲ့အဖွဲ့ကိုကျော်လွှားပြီး ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ အချုပ်ခန်းထဲသွားပြီး ဖမ်းထားတဲ့ သူတွေကို ၀င် ကြည့်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၃ ယောက်၊ အမျိုးသမီးတွေပါပါတယ်။ အားလုံးဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ ပျံကျတွေပါ။ တောင်ဥက္ကလာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သုဝဏ္ဏ တွေမှာ ဖမ်းမိတဲ့သူတိုင်းဟာ သူတို့လိုတွေပဲဖြစ်တယ်။ ထူးဆန်းတာက သူတို့အားလုံးဟာ သေ မှာကို လုံးဝ ကြောက်ဟန်မပြ ဖြစ်နေပါတယ်။ ခေါင်းဖြတ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ရုန်းကန်ခြင်းမရှိဘဲ အသာတကြည် တ ယောက်ပြီးတယောက် ခေါင်းထိုးခံပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုက ရိုက်နက်ထားတဲ့အတွက် တချို့ဟာ ဖူးယောင်နေ တယ်။ သူတို့ဟာ လုံးဝ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အသနားခံခြင်းမပြကြဘူး။ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေကလဲ သူတို့အမူအရာကို ကြည့်ပြီး ဒေါသထွက်လာကြတယ်။
မြို့နယ်ကျောင်းသားတွေကလဲ ကျနော်ကို ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့ မေးကြတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျနော်အကြံရသွားပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆေးတမျိုးမျိုး မိနေတဲ့ပုံတွေထွက်နေပါတယ်။
သူတို့ကိုမသတ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ ကောင်းမွန်စွာ အစာရေစာပေးပါ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံဖို့၊ သုံး လေး ရက် ထားစောင့်ကြည့်ဖို့ ကျနော် အကြံပေးလိုက်တယ်။ ၃ ရက် ၄ ရက်ဆိုရင်တော့ ဆေးပျယ်လာမယ်လို့ ကျနော် ယူ ဆပါတယ်။ ထိုစဉ်က ဘာဆေးတွေ တိုက်တာလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိပါ။ နောက်မှခန့်မှန်းကြည့်ရတာတော့ ယာမား ဆေးလို့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါက ၀မ်းခါစခန်းမှာ အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ စစ်သားတွေဖြစ်ရပ်နဲ့ တိုက်ကြည့်တော့ မှာ သိလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ ၃ လေးရက် ဆေးပျယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ ဟာ အခြေအနေ ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီး အသတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေပြနေပါတယ်။ သူတို့ကိုဘယ်သူတွေခိုင်တာ ဘယ်လိုလ်ုပတာဆိုတာတွေကိုဖေါ်ပါတော့တယ်။
လုပ်နည်းတော့ ဒီလိုပါ။ အရပ်သားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးလှုပ်ရှားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကို ထောက်လှမ်းရေးတဖွဲ့က ရေတွေ၊ အစာတွေထဲ အဆိပ်ခပ်ခိုင်းတယ်။ သူတို့က ခတ်တယ်။ သူတို့ခတ်နေချိန်မှာ အရပ်သားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ နောက်ထောက်လှမ်းရေးတဖွဲ့က ဖမ်းလိုက်တယ်။ ဒီမှာ အဆိပ်ခတ်သူတွေမိပြီ ဆိုပြီး ရိုက်နှက်တာ သတ်ဖြတ်တာတွေကို ဦးဆောင်လုပ်ပြတယ်။ ဒီအခါမှာ ဒေါသမထိမ်းနိုင်တဲ့ လူအုပ်က ဆက်ပြီး ရိုက်တာ တွေ သတ်တာတွေ လုပ်မိကုန်တယ်။ နောက်ထပ် အရပ်သားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတဖွဲ့က သတ် ဖြတ်နေတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း သုံးဖွဲရှိတယ်။ ၈၈ တုန်းက ကျန်ာတို့မှာ ကင်မရာရှိတဲ့သူ အလွန်နည်းပါ တယ်။ ဗီဒီယိုဆိုတာကတော့ ဝေးစွဖြစ်ပါတယ်။ ရှိတော့ရှိကြတယ်။ သိပ်ကိုနည်းတယ်။
တစ်။ အရပ်သားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရးတဖွဲ့က ဆင်းရဲသားတွေကို ပို်က်ဆံပေးပြီး အဆိပ်ခတ်ခိုင်း တယ်။
နှစ်။ အရပ်သားယောက်ဆောင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတဖွဲ့က အဆိပ်ခတ်သူတွေကို ဦးဆောင်ဖမ်းပေးတယ်။ ရိုက် နက်တယ်။ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူထုလက်ထဲ ထည့်ပေးတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့ လူကပဲဦးဆောင်ပြီး သတ်ပြ တယ်။
သုံး။ အရပ်သားယောက်ဆောင်ထားတဲ့ သတင်းထောက်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းတဖွဲ့က (တယောက် သို့ မဟုတ် နှစ်ယောက်) က ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်။ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို သတင်းစာတွေ၊ တီဗွီတွေမှာ ဆက်တိုက်ပြ ပေးတယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးက ဆူပူအကြမ်းဖက်ပုံစံကို ဖျက်လိုက်တာခံရတယ်။ မင်းမဲ့စာရိုက်တွေဖြစ်လာပြီလို့ ၀ါဒဖြန့်တယ်။ စစ်တပ်က ပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။
လမ်းဘေးမှာ ဖဲသုံးချပ်ကစားနေတာ ခင်ဗျား တခါတရံတွေဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုကစားနေတာတွေ့ရင် ဘယ်တော့မှ ၀င် မထိုးမိပါစေနဲ့ ခင်ဗျား ပါသမျှကုန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဖဲသုံးချပ်သမားက ခင်းဗျားကို လိမ်နေတာသာ ဖြစ်တယ်။
တကယ်လို့ ဖဲသုံးချပ်သမားကို လူတယောက်က ထိုးနေတာ ခင်ဗျားတွေ့မယ်။ မနေနိုင်ဘဲ ခင်ဗျားဝင်ထိုးမယ်။ တကယ် တော့ အဲ့ဒီလူက သူလူပဲ ဖြစ်တယ်။ ၂ ယောက်ထိုးနေတာတွေ့ရင် နှစ်ယောက်စလုံးက သူ့လူတွေပဲ ။
သူ့ကို ထိုးနေတဲ့ တခြားထိုးသားတွေ ၅ ယောက်ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားက ၀င်ထိုးတဲ့အခါမှာ ၆ ယောက် ဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒီ ၅ ယောက်စလုံးက သူ့လူတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတယောက်ထဲကို ၀ိုင်းလိမ်တာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီနည်းက မြန်မာနိုင်ငံ တခုတည်းမှာရှိတယ်တော့ မအောက်မေ့ပါနဲ့ မြန်မာတွေပဲတတ်တယ်လို့တော့ ဘဝင်မမြင်လိုက်ပါနဲ့ ဥရောပ၊ အရှေ့အ လယ်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပါ ဒီနည်းဟောင်းကိုပဲ သုံးနေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
မီတ္ထီလာကိစ္စ ကျနော့် အတွေ့အကြုံတွေအရ
၁။ ထောက်လှမ်းရေး၊ ရဲ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေထဲက အထူးတာဝန်ပေးထားသူတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေတယ်။
၂။ တဖွဲ့က ဗုဒဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကို အရင်စသတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၃။ တဖွဲ့က ဒီသတင်းကို ဝါဒဖြန့်ပေးတယ်။
၄။ တဖွဲ့က မူစလင်တွေကို စတင်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ပေးတယ်။ နောက်တော့ ဘုမိသိ ဘမသိ ဒေသခံတချို့ ပါသွားနိုင် တယ်။
၁၉၆၂ က တိုင်းရင်းသားတွေ ခွဲထွက်မယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်ပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ခုနစ်က မင်းမဲ့စာရိုက် ဖြစ်လာလို့ဆိုပြီး စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနစ်မှာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ မထိမ်းနိုင်တော့လို့ဆိုပြီး စစ် တပ်က ပုံစံတမျိုးနဲ့ အာဏာသိမ်းလာဖို့ ကြံစည်နေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုကို နှစ်မျိုးနှစ်စား ခွဲနိုင်ပါတယ်
လက်ရှိအာဏာရအုပ်စု (ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးစိုးသိမ်း၊ ဦးအောင်မင်းတို့ ဦးဆောင်သော အုပ်စု)။ ဒီအုပ်စုက အာဏာလက်ရှိဖြစ် တယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလောက်မှာပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်။ လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေမှာ အာဏာမရှိကြပါ။ သူတို့ဟာ အပြောင်းလဲကိုလိုလားတယ်။ ဒီအပြောင်းလဲမှာ သူတို့အတွက် အဆင့်နေရာ တခုရှိစေချင်တာကလွဲလို့ နောက်ပြန်လှည့်ခြင်ပုံ မရှိတော့ပါ။ အနောက်အုပ်စုနဲ့ ပြေလည်မှုကို ပိုမိုလိုလားလာတယ်။ တ ရုတ်ပြည် သြဇာအောက်ကနေ လွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပိုလုပ်ချင်လာကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးမှာ မဟာမိတ်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်။ အီကရက်စ်၊ ဗဟုဖွင့်ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေက (က) အုပ်စုရဲ့ မဟာမိတ်တွေ ဖြစ်လာနေတယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ လက်ရှိအကြပ်တည်းကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာကို တွေ့ရတယ်။
မကြာသေးခင်က အာဏာစွန့်လိုက်ရတဲ့ အုပ်စု (ဦးသန်းရွေ၊ ဦးအေင်သောင်း၊ တင်အောင်မြင်ဦး၊ ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်မြင့် လှိုင် တို့ ပါဝင်တယ်။ သူတို့နောက်က ခရိုနီတွေလဲ သူတို့ထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်။ ဒီအုပ်စုက မူစလင်အဓိကရုဏ်းကို အဓိ က ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့က လက်ရှိစစ်ဦးစီချုပ် အပေါ်မှာရော၊ စစ်တပ်၊ အောက်ခြေအစိုးရဌာနများနဲ့ ကြံ့ဖွတ် ထဲမှာပါ သြဇာရှိနေပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းက သူတို့နဲ့ ပြန်လည်နီးကပ်နေတယ်။ သူတို့က တရုပ်ပြည်နဲ့ ပြန်လည်နီးကပ်ချင် တယ်။ ဦးပိုင်ကိုကာကွယ်မယ်။ အနောက်အုပ်စုနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေမယ်။ အာဏာပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာတာကို တွေ့ ရတယ်။
သူတို့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ဟန် -
မဟာ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကို လက်ခံတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အာဏာ နိုင်ငံရေးအတွက် ကရိယာတခုလို အသုံချလေ့ရှိ တယ်။ (ဘုရားများတည်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးများကို ဘွဲ့တံဆိတ်ကပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများကို ဖန်တီးခြင်း များ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။)
၁။ ဘာသာပေါင်းစုံ (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မူစလင်၊ ခရစ်ယန်၊ ဟင်ဒီ ) ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲတွေကို မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ဖေါ်ထုတ်ပါ။
၂။ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဆုတောင်းပွဲတွေ စတင်လုပ်ပါ။
၃။ အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုတ်ချ ၊ ညီညွတ်မှုကို ပြသသောအားဖြင့် အဖြူရောင်အင်္ကျီများကို ဆင်တူဝတ်ကြပါ။
၄။ ညဖက်များမှာ ကင်းချပါ။
၅။ အကြမ်းဖက်သမားများကို ခုံခံဖို့ ဒုတ်၊ ဒါး လက်နက်များကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။
၆။ သူတို့ထဲက တယောက်ယောက်ကိုမိရင် ရဲစခန်းမပို့ပါနဲ့ ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ စစ်ဆေးပါ။
(၈၈ တုန်းက ဗိုလ်ကြီးစည်သူ၊ ဉာဏ်လင်း၊ သက်တင်စိန် တို့ ဒေါ်စုကို လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ ပြစ်လုပ်ကြံဖိုလာတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ သံဃာတွေက သိမ်ကြီးဈေး သိမ်တော်ကြီးထဲထည့်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့သလိုမျိုး စစ်ဆေးပါ။ )
၇။ အပြန်အလှန်ကူညီကြပါ။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါ။
၈။ ဒီနေ့ကာလမှာ ဘာသာတရားအားလုံး အသံချဲ့စက်များမသုံးဘဲ အိမ်ထဲမှာပဲ ၀တ်ပြုဆုတောင်းကြပါ။
၉ ။ မူစလင်ဘာသာဝင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ မလုံခြုံဘူးဟု ယူဆပါက အမေရိကန်သံရုံး၊ ဥရောပသံရုံး၊ ကနေဒါနှင့် သြစတေးလျသံရုံးများထံ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ခိုလှုံခွင့်များ ယာယီတောင်းခံကြပါ။
Posted: 04 Apr 2013 01:51 AM PDT
Posted: 04 Apr 2013 01:44 AM PDT
Updated4April 2013, 0:18 AEST
says he has dissolved parliament, paving the way foralong-anticipated
general election within weeks.
Nasional coalition, dominated by the United Malays National Organisation
(UMNO), lost its
Posted: 04 Apr 2013 01:15 AM PDT
Posted: 04 Apr 2013 12:52 AM PDT
Recently, The Actors' Studio heldasuccessful reading of the book 'Ladder in the Water' by Feroz Dawson at The Actors Studio @ Lot 10 which saw the likes of Dato' Faridah Merican (author's mother), Joe Hasham OAM, and Ida Nerina among the readers. This evening, the same event will be held in Penang at Gallery 2, penangpac, Straits Quay @ 8 p.m. The book is published by The Actors Studio Sdn Bhd (Malaysia).
According to Mr. Ooi Kee How, Theatre Manager of penangpac:
Feroz Dawson's stories feature Malaysians bonding in their carefree besotted youth, arriving at the cusp of adult responsibilities and maturity to be confronted with weightier matters like death, marriage, politics.
'Fireworks' is about complex responses to the loss ofafriend inaroad-accident; the good dying young may be fine inarebel song lyric, but the reality ofacoffin isadifferent thing altogether. The juvenile vandal expressing political dissidence in 'A Drop of Silver' grows into the unmoved protagonist in 'No One Has Claimed Responsibility' who listens toapolitical rant dictating spiritual purity and thinks of food. Enduring relationships show signs of strain and fissure in 'Ladder in the Water' whileanew one is formalised in 'The Licence'.
A generation grows up together and then moves on, away, takes different paths, and if that generation is lucky there will beawriter like Feroz Dawson to record their emotional starts and stops and stutters, as in these stories.
Dr Tom is actually the principal of Enhance Education, Straits Quay. Dr Craig-Cameron has extensive leadership and management experience in the fields of international relations, international education and English language teaching. He has served as Director of the British Council in Malaysia and in Pakistan, and as Counsellor for Educational and Cultural Affairs in the British Embassy in China: in all those operations teaching English and managing British Examinations were major businesses.
He also was Education Attaché to the British Embassy in Washington DC, USA, and Science Programme Manager for the British Council in China and in Saudi Arabia. Within the British Council in the UK he was Director of UK Partnerships responsible for all levels and types of education from universities through colleges and language schools to primary schools. He chaired the Management Boards for the UK Educational Counselling Service and for Accreditation UK* -aspecial partnership with English Language schools throughout the UK to quality assure and accredit language schools and ensure high standards of English language teaching and professional ethics.
If you are free, please attend this reading. It will beavery meaningful evening. Come and discover why...See you there!
တရားခံ ဘယ်သူလဲ…..(မေးရတာများလါပြီ၊ မရှိတာလဲ များလါပြီ၊ ပြဿနာလဲ များလါပြီ)…..
ဒီပြဿနာက ဆိုမာလီမှာ မင်းမဲ့စရိုက် စစ်ဖြစ်သလိုပါဘဲ အကယ်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် မပတ်သက်ပါက ဥပဒေသက်ရောက်သော နေရာဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် တရားခံအမှန်ကို အရေးယူပေးပါ….။
မင်္ဂလါတောင်ညွန့်တွင် သူခိုးနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလို့ အရာရှိတွေ အရေးယူသလိုပေါ့ အကြမ်းဖက် မီးလောင်ဗုံးနဲ့ထုတာတို့ မီးရှို့ပြီးသတ်တာတို့ ဆိုတာ သူခိုးထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်…..အဲဒီလူတွေက အရမ်းအုပ်စုကြီးလါရင် အာဏာသိမ်းသွားအုံးမယ်နော်…..
စပိန်နိုင်ငံက နွားရိုင်းသတ်ပွဲ ကြည့်ဘူးကြမှာပါ နီနီမြင်တာနဲ့ ရန်သူဆိုပြီး တိုက်ခိုက်တော့တာဘဲ အဲဒီတော့ သင်္ဃာန်းဝတ်ထားတိုင်း ဘာသာရေး တံဆိပ်တစ်ခု လုပ်လိုက်တိုင်း ယုံကြည် လက်ခံနေမယ်ဆိုလျှင် အသင်တို့လဲ ဘာနဲ့တူနေမလဲ….. မစဉ်းစားဘဲ ဦးဏှောက်မရှိဘဲ လါမတိုက်ခိုက်နှင့် အခုပြောနေတာတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာ…….
၁။ ဒီလိုဖြစ်လါမှာကို သိသင့်တယ် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ တရားခံပါ ဒီဂက်စ် ထွက်တယ်လဲဆိုရော ရခိုင်ပါတီက လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် တောင်းဆိုတယ် ဒီတော့ အစိုးရက ကြေးနီတောင်လိုဘဲ စိက်ဆိုးခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ကို တိုက်ရိုက်မလုပ်ဘူး အင်အားနဲသွားအောင် တောင်ကုက်၁၀ယောက်နဲ့တင် ရန်တိုက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး စစ်တလင်းဖြစ်ပြီး ပွဲပြီးသွားတယ်။…… အဲဒီပြဿနာကို
၂။OIC လါမယ်ဆိုတော့ အဖြစ်မှန်ကို နိုင်ငံခြားက မသိစေချင်ဘူး ဒီတော့ ဦးဝိရသူ ပွဲထုက်လိုက်တယ် သူကလဲ တာဝန်ကျေပါတယ် ဆန္ဒတွေပြတော့ အဲဒီမှာ OIC နားသွားတယ်………ပြီးတော့
၃။ ဦးဝိရသူက သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံပွဲတောင် လုပ်ပြီး ပွဲခံပြီး လှည့်လိုက်သေးတယ်……..
၄။ AB မြောက်ပိုင်းသတ်မူ့နဲ့ မေသင်္ကြန်ဟိန်းကိုတည်ပြီး လှည့်နေသေးတယ်….မရဘူး ရပ်သွားတယ် ဟုက်မှ မဟုက်တာ
၅။ လက်ပန်းတောင်းက စပြီ အခြေအနေထိန်းမရတော့လို့ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ် စိက်ဆိုးလို့ တိုက်ရိုက် မီးလောင်ဗုံးနဲ့ စော်ထဲ့လိုက်တယ် ဦးဝိရသူက အလွတ်ရှောင်တယ်…. ပိုစိုးသလိုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းက ထပ်ရပ်နေတဲ့အပြင် ပြည်ပက လူတွေပါ ၀င်ပါလါခဲ့တယ်…..ဒီတော့
၆။ ကချင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်….စစ်ပွဲသာရပ်တယ် လက်ပန်တောင်းတောင်က မပြီးခဲ့ပါဘူး….ထပ်ပြီး
ရ။ အမေစုနဲ့ကော်မရှင် လုပ်ပြန်တယ် မရဘူး……..အဲဒီတော့ ဘာကြောင့်လဲ အဖြေရှာကြပြီ……..
အဲဒီအချိန် ၀ိရသူက ဆေးလိုက်ကုနေလိုက်တယ် အရုးကွက်နဲ့ပေါ့..
တွေ့လိုက်ပါပြီ အဖြေက ပြည်သူတွေကို(သူတောင်းစား ဗိုက်ဝတော့ ဟိုဟာဖြစ်သလို) မြင်လိုက်တော့ ပြည်သူကို ခြေရိုက်ချိုးပြီပေါ့လေ ရခိုင်အတိုင်းပါဘဲ……
၈။ ၉၆၉ စတည်တယ် သွေးထိုးတယ် ပြည်သူကမပါဘူး ဒီတော့ လက်တွေ့အနေနဲ့ သာကေတမှာ စကြည့်တယ် အောင်မြင်တယ် ပြည်သူမပါဘူး ဝေလေလေဘဲပါတာ……ဒီတော့
၉။ ၉၆၉ စတေကာနဲ့ ဘာသာခြား ဈေးမ၀ယ်ဖို့ ဧည့်သည်တို့ အိမ်ရှင်တို့ ကုလါးကသိမ်းမယ်တို့ အမျိုးကိုစောင့်ထိမ်းရမယ်တို့ ဦးဝိရသူကို မွှေခိုင်းပါပြီ သူကလဲ မိန်းခလေးတွေကို ဘာသာခြား စော်ကားတာတွေနဲ့ဘဲ အမှန်းတိုက်ခိုက်တော့တာဘဲ….ဒါပေမဲ့ ထင်အလောက် ပြည်သူမပါဘူး။…..ဒီတော့
၁၀။ ၁၉-၃-၂၀၁၃ မန္တာလေးမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ လက်တွဲရေးဖွဲ့တယ်…ဦးဝိရသူ မျက်စပြစ်တယ် ….
မစိုးရိမ်ကျောင်းက ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူတယ် တိုက်ဆိုင်မူ့လါး ကျောင်းသိမ်းမှာလါး။…..
၁၁။ ၂၀-၃-၂၀၁၃ မိတ္တီလါပေါ့ စတင်အကြမ်းဖက် ခံရတာ ကြေကွဲစရာပါ။ ပြီးတော့ဆက်တိုက် မြို့တွေ တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့လေ။…..
၁၂။ ၂၇-၃-၂၀၁၃ တစ်ခါထဲ အာဏာပါ သိမ်းလိုက်ပါတယ်…….
တော်ပါတော့ ဗိုလ်ချူပ်မူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရယ် ကြိုက်တာလုပ်ပါတော့ဗျာ။…..
(သင်ပြုသမျှကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လါမည်)
ရခိုင်ပြည်မှထွက်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုရခိုင်ပြည်မှာသုံးရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှပြောကြားသောကြောင်း၊ရခိုင်ပြည်မှထွက်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုရခိုင်ပြည်သူများသုံးစွဲခွင့်ရရန်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြသော်လည်းသုံးစွဲခွင့်တစ်စုံတစ်ရာပေးရန်လမ်းစများကို မတွေ့ရသည့်ပြင်ဒေသခံပြည်သူများမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းမျိုးစုံခံစားနေကြရသည်။ ရခိုင်ပြည်မှဓာတ်ငွေ့ကိုရခိုင်ပြည်မှာသုံးစွဲရန်အခက်ခဲများစွာရှိကြောင်းကိုလည်းသိန်းစိန်အစိုးရမှ အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်များပေးလျှက်ရှိသည်။တရုတ်ပြည်ကိုသယ်ယူရန်လွယ်ကူပြီး၊ရခိုင် ပြည်ကဓာတ်ငွေ့ကိုရခိုင်ပြည်တွင်ဖြန့်ဝေရန်ခက်ခဲနေခြင်းသည်လည်းများစွာအံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်သူတို့ဘဝသည်ဖောင်စီးရင်းရေငတ်ဘဝသို့ရောက်နေကြရသည်။